WaT Season 2 WaT Wave: FX Series Star Talks Meeting Oscar Winner - Dhaqanka Pop
DAVE Star GaTa wuxuu kahadlayaa sidii uu uheli lahaa Leonardo DiCaprio, Xiligii 2, iyo Mustaqbalkiisa Mustaqbalka
Bilowga karantiilnimada COVID-19, waxaan ogaaday is-beddelka sii kordhaya ee jaceylka FXXs majaajilada aadka loo helay, DAVE , heesaha heesaha Lil Dicky (Dave Burd), oo si dabacsan ugu saleynaya dhacdooyinkii noloshiisa dhabta ahaa. Waxay xitaa soo bandhigtay ninkiisa buunbuuninta dhabta ah, GaTa (Davionte Ganter), kaasoo qeybtii shanaad ee DAVE Xilligii ugu horreeyey (Hype Man) wuxuu ahaa hor-iyo-dhexe sheeko ku lug leh cudurka laba-cirifoodka ee nolosha dhabta ah. Mawduucoodu waa bulshada Madow - dhammaan bulshooyinka laga tirada badan yahay, si daacad ah - waxay u baahan yihiin inay wax badan ka hadlaan, oo ay GaTa ku riixaan iftiinka, meel ay ka raaxo badan yihiin.
barafka boqornimada iyadoo la isticmaalayo kareemka tartar
GaTas wuxuu ku jiray waddada toban sano oo lagu daray, isagoo ku maaweelinayay dad weynaha qaar ka mid ah ciidaha ugu waaweyn dalka oo dhan. In kasta oo uu sheegayo inuusan waligiis qorsheynin inuu ficil sameeyo, GaTa wuxuu u sheegayaa Complex in kani uu qeyb ka ahaa qorshe weyn. Waxaan dareemayaa in Ilaah ii qurxiyay si aan adduunka ugu maaweeliyo, kaliya sababtoo ah waxaan safrayay 10 -kii sano ee la soo dhaafay, anigoo dadka madadaalinaya.
Kahor 16 -ka Juun Xilliga 2 horudhaca ah DAVE on FXX, GaTa waxay ka hadlaysaa dadka la xiriira sheekooyinkooda halganka caafimaadka maskaxda, ka helidda qalabka Bun B iyo Leonardo DiCaprio, iyo qorshayaashiisa mustaqbalka, labadaba jilaa ahaan iyo agaasime hal abuur leh.
Sawirka Byron Cohen/FX
2020 sidee buu kuu ahaa? Karantiilkiinu sidee buu ahaa?
Nin, 2020 wuxuu ahaa wax la yaab leh, ninyahow. Karantiilkeyga waa la shiday. Kadib markii aan dhameeyay toogashada DAVE , Waxaan aaday oo waxaan ka iibsaday eygii ugu casrisanaa halkaas, bulldog Faransiis ah. Marka waxaan ku raaxeystay karantiilkeyga eygayga. Dabcan, daawashada DAVE , qosol habeen walba. Waxaan mashquul ku ahaa. Ma taqaan waxaan ula jeedo? Abuuritaanka mashaariic cusub, waxaan ka shaqeynayaa farabadan mashaariic kala duwan oo runtii maalin walba waan shiidi jiray, nin yahow. Joogitaanka wanaagsan, qaadashada maalinba maalin.
Wax badan ayaad ka maqashay shaqadaadii DAVE . Miyaad la yaabtay soo dhaweynta aad ku qaabishay?
Maya, kuma aanan la yaabin jawaab -celinta, maxaa yeelay waa lambarka koowaad ee ka muuqda FX iyo Hulu. Runtii waan la yaabay dhammaan asaaggaygii caanka ahaa ee i soo gaadhay, sida Leonardo DiCaprio ii sheegay, Shaqo Wanaagsan, iyo waxyaabo kale. Diyaar uma ahayn jawaab celinta noocaas ah. Laakiin taageerayaasha iyo walxahaas oo kale, waxaan filayay sababta oo ah dadku waxay jecel yihiin wax kasta oo cusub, qosol leh, [oo] ka dhiga inay dareemaan wanaag. Kaliya diyaar uma ahayn dhammaan ciyaartoydii NBA iyo qof walba inuu ii sheego sida, Nin, waan ku jecel nahay. Waxaan la hadlay Bun B. Sida markaan daawado bandhigga, waxaan dareemayaa inaan na daawanayo. Markaa way wanaagsan tahay in jacayl badan laga helo dad badan oo caan ah iyo dad aan filaayo.
Xaggee baad joogtay markii aad la hadashay Leonardo DiCaprio?
Waxaan ku sugnaa meel aan la shaacin oo ku taal Malibu. Ma sheegi karo guriga aan joogay, laakiin waxaan joogay guri kale oo caan ah waxaanan la socdaa shaqaalahayga. Kadibna waxay la mid tahay goobo, u sheeg, dad caddaan ah oo saaxiibtinimo leh. Aniguna waxaan garaacayaa goobtan saaxiibtinimo, ka dibna mid ka mid ah dadkayga ayaa bilaabay inuu i taabsiiyo lugta waxayna jecel yihiin, Yo, fiiri, fiiri, fiiri. Aniguna kor baan u eegayaa iyo Leonardo DiCaprio. Oo wuxuu jecel yahay, Yo, waan jeclaaday dhacdadaada, ninyahow, waxaad u samaysay caafimaadka maskaxda iyo wax kasta oo la mid ah. Wuxuu jecel yahay, Waxay taabatay naftayda. Ka dibna waxaan asal ahaan bilaabay inaan u sheego Leo inta aan ahay taageere. Laakiin haa, taasi waa sida ay u dhacday, nin yahow. Waxaan ka helay sawirka aniga iyo Leo barta Instagram -ka, sidoo kale, haddii aad rabto inaad hesho hubin dhab ah.
Weligaa ma lahayd hami aad wax ku qabato?
Maya . Waxaan sameeyay dhammaan ciidahan. Waxaan dareemayaa in Ilaah ii qurxiyay si aan adduunka ugu maaweeliyo, kaliya sababtoo ah waxaan safrayay 10 -kii sano ee la soo dhaafay, anigoo dadka madadaalinaya.
Markaa waxaad maqashaa in uu jiro dabeecad adiga kugu salaysnaan doonta bandhiggan, laakiin waa inaad u baahataa doorka. Maxay ahayd nidaamkaagu? Ma tagtay fasallada jilista? Sideed ku ogaatay sidaad naftaada ugu ciyaari lahayd xisaabinta?
Weligay ma tagin fasallada jilaaga ama wax la mid ah. Kaliya waxaan ka hadlaa gudbinta halganka, maxaa yeelay wax badan ayaan soo maray. Markaa waa sababta aan awood u leeyahay inaan bixiyo uun bandhigyadan muuqda, firfircoon, nin. Sababtoo ah waxaan dareemayaa wanaag ku saabsan walxaha waxaanan soo maray wax badan. Waxaan kaliya u dhaqmaa farxad iyo xamaasad saafi ah si aan u joogo boos aan ku jiro.
Nooceeda oo kale sida noqoshada heesaha. Waxaad had iyo jeer hor joogtaa kaamirada iyo walxaha, sidaa darteed way ii fududahay inaan u gudbo maxaa yeelay waxaan sameeyay fiidiyowyo muusig oo la toogtay, waxaan ku jiray qaar ka mid ah heesaha muusikada muusikada ee ugu xiisaha badan dad badan. Markaa waxaan u malaynayaa inaan naftayda uun isu diyaarinayey inaan noqdo xiddig sannadahaas socdaalka ah oo dhan.
Waxay ahayd wax lala yaabo in la isku dayo in la ogaado waxa DAVE Nooca GaTa ma noqon doonaa?
Maya, sababta oo ah inaan daacad kuu noqdo, lambarka koowaad, waxaan ka imid Koonfurta Bartamaha LA, sidaa darteed waxaan ka imid wadnaha magaalada gudaheeda. Waad ogtahay waxay jecel yihiin inay yiraahdaan, dadka geetada, intaas oo dhan, wax kasta. Markaa markii hore, waxaan isku dayey inaan dib isu celiyo oo aan faafreebo naftayda, sida, Hey Dave, waad hubtaa inaan awoodi doono inaan dhaho erayga N ama qalooc-qumman iyo cuss, maxaa yeelay taasi waa sida aan u hadlo. Maaha wax wanaagsan in si khaldan loo hadlo, laakiin waxaan ahay uun wax soo saarka deegaankayga. Laakiin u imow si aad u ogaato, nin, FX wuxuu jeclaa qosolka. Ma taqaan waxa? Waxay jecel yihiin, maahan inaad akhrido layn kasta oo warqadda ku taal. Waxaan kuu oggolaan doonnaa inaad hagaajiso, sameyso wax adiga kuu gaar ah maxaa yeelay waxaad la timaadaa alaab, kaliya odhaahyo dhab ah oo aan ka helo agagaarka xaafadeyda. Sida haddii aan kuu sheego, farmaajo ku dayaxa, keen buskud. Sidaan taas uga helay boog waddada taal. Qoraa sidaas iima sheegi karo. Waa odhaahyadiisii ​​dhabta ahaa, alaabtii aad maqashay markii aad weynaatay, sida khadadka iyo waxyaabo kale oo aan isticmaalo oo aan had iyo jeer ku dhiirrigeliyo.
Way fiicnayd inaan awoodo inaan noqdo naftayda, nin. Taasi waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag ee ay ku sheegaan in lagu sameeyo kamarad, waa inaad adigu noqotaa.
Waxaa laga yaabaa in taasi tahay sababta ay dadka qaar u galaan jilitaanka. Way ku adag tahay inay wax ka qabtaan maalin-ka-maalin. Waxay jecel yihiin inay galaan shakhsiyadda qof kale.
Taasi waa sababta aan u helay khibrad, nin. Waxaan ku qasbanaaday inaan door kale u yeesho filimkan gaagaaban oo aad bay u fiicnayd inaan noqdo qof kale oo aan ahayn GaTa. Sababtoo ah aniga ahaan, way fududahay inaan noqdo GaTa. Nin, waxaan ahay ninka kaliya ee isku dayaya inuu noqdo qabow 24/7, nin. Way fududahay in la isku dayo in la qaboojiyo, laakiin ma fududa in dadka la ogeysiiyo inaad tahay laba -cirifoodka Ma sahlana inaad dadka u sheegto inaad dareento sidan. Markaa taasi waa waxa aan jeclahay inaan sameeyo, kaliya u oggolaanshaha dadka inay galaan daqiiqadaha dhabta ah oo ay noqdaan kuwa nugul.
Muuqaalkaas bandhiggu wuxuu ku salaysnaa xaalad dhab ah, sax?
Haa Haa. Dhab ahaantii, nin. Runtii waxaan ku jiray qolkaa suufka ah 72 saacadood. Ma aysan tusin waxaas oo dhan, laakiin haa. Xaqiiqdii waxaa la ii tixgaliyay 5150, laba -cirifoodka. Runtii waxaan ku jiray isbitaalka. Hooyooyinkay waxay iigu yeereen shariifyada, sagaalka oo dhan, nin. Laakiin wax yar ayaan u dhignay TV -ga.
Waxaan xasuustaa saamaynta muuqaalkaas. Waa wax la yaab leh in la maqlo in xiriirkeedu uusan ku koobnayn kaliya Leonardo DiCaprio ama Bun B, laakiin ay la socoto dadka Madowga ah, ama dadka bulshada guud ahaan. Ma adkaatay? Waxaan qiyaasayaa in dad badani ay ku soo gaadheen adiga iyo nooc ka mid ah inay la wadaagaan sheekooyinkooda iyo sida ay tahay inay u soo baxaan. Miyay adkayd in wax badan laga qabto?
Maya, xaqiiqdii ma ahayn, nin yahow. Sababtoo ah sidaad sheegtay, dad badan ayaa durba wax ka qabta arrimahan maskaxeed, laakiin kuma eka bulshada Madow. Markaa kama hadalno, waa ceeb ku saabsan caafimaadka maskaxda ee bulshada Madow. Markay dadka caddaanka ahi ii yimaadaan oo ay iila ekaadaan, Haa, nin, runtii waxaan la xidhiidhay sheekadaada. Waan dareemayaa, laakiin dadka laga tirada badan yahay ayaa haysta [ka yar] khayraadka. Marka marka qof Madow ah uu ii yimaado oo ii sheego, Oh nin, Qeybta 5, nin run ahaantii way ila xiriirtay, waxay kaliya i dareensiisaa nooc ka mid ah hab. Sababtoo ah waxaan ogahay in 9 jeer 10 kiiba dadka laga tirada badan yahay ay nasiib yar yihiin. Si ay u yidhaahdaan, Ma taqaannaa waxa? Waxaad iga dhigtay inaan garto inaan sidaas oo kale ahay, waxay i dareensiineysaa wanaag, maxaa yeelay bulshada laga tirada badan yahay, runtii kama hadleyno dhibaatooyinkaas. Marka markay dadka aniga ila midka ahi ii sheegaan inay aniga ila xiriiraan, nin, waxay dareemeysaa wanaag, nin.
Waxaan ka hadalnaa waxyaabo badan oo waaweyn oo soo baxay 2020, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo xun, sidoo kale. Dadka madow gaar ahaan, wax badan bay la macaamilayeen. Ma jiraan wax talooyin ah ama talooyin ah oo aad u soo jeedin karto dadka laga yaabo inay u baahdaan hab ay ku hadlaan oo aan runtii haysan kheyraadka?
Oh haa, hubaal, nin. Waxaan u helay dhowr jimicsi iyo xoogaa talooyin ah dadka doonaya inay muujiyaan naftooda. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa fadhiiso, qor fikradahaaga. Hadday wanaagsan yihiin ama ay xun yihiin, wax macno ah ma leh Kaliya ku qor fekerkaaga warqad. Haddii aad dib u milicsato toddobaad gudihiis, bil, sannad, waxaad awoodi doontaa inaad dib u eegto xaashidaas oo aad noqoto, OK, waxaan dareemayay sidan oo kale sababta? X, Y, iyo Z. Tani waa waxa igu kiciyay. Waxaad xasuusan doontaa intaad wax qoreysid, maxaa yeelay kuwani waa dhibaatooyinka aad la kulanto. Markaa markaad is-milicsato, taasi waa qaabka daaweynta ugu fiican. Haddaba qor fikradahaaga.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in lala wadaago fikradahaas qof. Ha ka baqin in lagu xukumo. Haddii aad tiraahdo, Haye, ninyahow, maanta waxaan dareemayaa waalan. Waxaan rabaa inaan ka boodo dhagaxa, qor, ka dibna hubi inaad qof u sheegto si aad xoogaa caawimaad ah u hesho. Sababtoo ah isgaarsiintu waa daaweynta ugu fiican. Mararka qaarkood mar walba ma aad awoodi doontid inaad u tagto dhakhtarka darajada sare ama dabiibaha, markaa waxaad u baahan tahay inaad u sheegto qof aad ku qanacsan tahay. Hadday tahay saaxiibkaa marwadaada, ha ahaato walaalkaa, hoy, ha ahaado qof shaqadaada jooga, laakiin isgaarsiintu waa daaweynta ugu fiican. Waana bilaash.
Xilliga 2 ayaa soo socda. Ma ka hadli kartaa wax yar oo ku saabsan waxa aan ka arki doonno GaTa Xilliga 2?
Idinku waxaad arki doontaan GaTa iyo Dave oo la tacaali doona guusha aan eryanayno, sumcadda iyo jagada cusub ee aan gelineyno safarkayaga iyo wixii la mid ah. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan sii wadno inaan idinka qoslinno. Waxaan la wadaagi doonnaa daqiiqadaha nolosha dhabta ah yall. Dhab ahaantii waxaan sii wadi doonnaa dhiirrigelinta, dhiirrigelinta, oo waxaan sii wadaynaa inaan sii wadno inaan helno waqti aad u wanaagsan, nin.
Waxaad sheegtey inaad soo gashay riwaayad kale oo jilaa ah.
Haa, waa inay hadda wax ka beddelaan sidaan u hadlayno, ninyahow. Laakiin waxaan la shaqeeyay laba agaasime oo waa weyn iyo jilaa. Magaceedu waa Alexi Pappas iyo arooskeeda Jeremy [Teicher]. Waxaan helnay waqti aad u wanaagsan oo aan ku duubnay filimkan [ Ma aha Farshaxan ] ee Big Bear. Runtii wax badan kama sheegi karo sheekada sheekada. Kaliya ogow wiilkaagaGaTa wuxuu helayaa doorarka filimada iyo Im auditioning walxaha. Wax kasta oo miiskayga soo gaadha, waxaan ka saari doonaa beerta, nin yahow. Runtii waxaan doonayaa inaan dadka tuso inaan ahay jilaa weyn. Kaliya maahan nin qabow, nin.
Waxaan dhihi lahaa, ma jiraan doorar gaar ah oo aad raadinayso inaad gasho?
Waxaan rabaa inaan ciyaaro hacker computer. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku sugnaado meel aan ku ciyaari karo nooc ka mid ah bilayska/booliska oo xun oo ah meesha aniga iyo qofka ka soo horjeeda aan ku wareegaynno, joojino dadka. Waxaan ciyaari lahaa dabaasha. Waligaa ma aragtay Madoobe Madow.
Maxaa kale oo aad ka shaqaynaysaa?
Waxaan helay podcast soo socda oo dhakhso loo yaqaan Ghetto Brilliance .Isaga iyo labadayda hoome. Oo waxay doonayeen inay la hadlaan dadka, iyagoo keenaya koox farabadan oo marti ah. Lil Dicky ayaa noqon doona martida ugu horreysa ee podcast -kayga. Waxaan isku dayayaa inaan dadka u iftiimiyo oo aan ogeysiiyo inaad ka imaan karto meel kasta oo adduunka ah oo aad wax baratid oo aad ku hormarin karto nolosha. Taasi waa sababta tayda loo yaqaan Ghetto Brilliance . Waxaan ku shaqeynayaa sawir -gacmeed waxaanan ka shaqeynayaa bandhigga TV -ga dhabta ah. Wax baan isla helayaa hadda si aan ugu biiro shabakadahaan.
Sidii aan idhi, indhuhu waa ii jeedaan. Waxaan ka helnay showgii 1 -aad FXX iyo Hulu iyo walxahaas oo kale hadda. Waxaan isku dayayaa inaan ciyaaro chess, ninyahow. Haddii aan joogo meel aan wax ku abuuro, waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale ka faa'iideysto, si aan waqti fiican u yeelanno oo aan uga shaqeyn karo qeybtii labaad ee noloshayda Ma rabo inaan noqdo jilaa, nin. Waxaan ahay agaasime hal abuur leh.
waa kuma ciyaaryahanka ugu fiican nba abid
sida loo sameeyo dhadhanka keega sanduuq sida macmal
meesha laga iibsado buskudyada sonkorta ee saqafka sare
intee le'eg tahay loox cake loo isticmaalo